Nnukwu ebe a na -ekpo ọkụ na arụmọrụ ihicha zuru oke iji hụ na nri azụ azụ emechara nke ọma.
Site na jaket kpo oku, site na usoro igbapu mmiri, were condensate banye na jaket ahụ, wee banye n'ime igwe ọkụ mgbe ị jisịrị ọkụ, yabụ meziwanye arụmọrụ ọkụ ma belata ike ọkụ.
Akwadoro ya na onye na -eme mkpọtụ ihe eji eme ihe, obere mkpọtụ na ogologo ndụ.
Site na njigide hydraulic nwee ike ịmalitegharị na ibu.
Window nlele nwere ọkụ nke na -enyere aka inyocha ihe ahụ na -emepeghị.
Iji tube akụkụ anọ SS dị ka nguzobe nke edoziri n'ọnọdụ pụrụ iche iji gbochie nri azụ ka ọ kwakọba.
Igwe mkpuchi kpo oku na-eguzogide (diski) iji gbatịkwuo oge ndụ.
Ngwongwo igwe anaghị agba nchara nwere nguzogide corrosion ka mma.
Ọnụ ụzọ ámá, windo, akụkụ elu bụ igwe anaghị agba nchara; cylinder bụ nke igwe 16mm igwe.
Mpaghara dị n'elu
Ihe mejupụtara Drier bụ oghere na -ebugharị ya na kpo oku uzuoku na shei kwụ ọtọ nwere mmiri condensate uzuoku. Iji meziwanye ọsọ nke ihicha, shei ahụ na -anabata usoro sandwichi, mmiri condensate na -ewepụta site na uzuoku ọkụ nke oghere na -atụgharị (n'ozuzu n'etiti 120 ℃ na 130 ℃) nwere mmetụta ọkụ ụfọdụ na nri azụ n'ime cylinder.
A na -eji eriri ọkụ na -ejikọ osisi ahụ, a na -ejikọkwa eriri ya n'ahịrị ụkwụ na -agbanwe agbanwe. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ikpo nri azụ, kamakwa ọ na -ebugharị nri azụ n'akụkụ akụkụ nke njedebe. Ngwa nkesa uzuoku n'ime oghere na -agbagharị nwere ike ime ka ekesa uzuoku ahụ ka igwe ikuku kpo oku ọ bụla. Mmiri uzuoku na condensate na -asọba na coils n'akụkụ abụọ nke eriri ahụ n'otu n'otu, nke mere na mkpuchi kpo oku na -ejigide oke okpomọkụ mgbe niile.
Site na ntụgharị ogwe osisi, a na -akpalite nri azụ nke ọma wee gwakọta ya n'okpuru mmekorita nke eriri ụkwụ na eriri ụkwụ, ka nri azụ wee nwee oke kọntaktị na oghere na -atụgharị na elu nke mkpuchi. A kwadebere elu Drier igbe igbe maka ịnakọta vepo mkpofu na igbochi nri azụ ka ọ banye n'ime ọkpọkọ ọkpọkọ. A na -eji mkpuchi windo mechiri emechi zere iku ume ikuku ikuku. Uzuoku na -esi na njedebe nke ọdụ ụgbọ mmiri nri, na mmiri condensate na -agbapụta na njedebe nke mwepụta azụ n'ime jaket ahụ, wee wepụta ya na jaket nke njedebe nke ọzọ, n'ikpeazụ na -abanye n'ime ọkpọkọ mmiri condensate niile. .
Nke gara aga: Ịghasa Press (High Quality Ugboro abụọ ịghasa Press Fishmeal nhazi Machine)
Osote: Nnyocha nyocha
Eriri igwe Pipe Drier
Onye njikwa diski
Ụdị Disiki Maka Osisi Azụ
Drier N'ihi Plant Nri nhazi osisi
Nri Nri Azụ
Onye na -akụ azụ
Ihe mgbochi agụụ
Ngwa mgbake Condensate (Conden dị elu ...